Sidee Loo Sameeyaa Haddii Qubayska Mar Kale La Xayiro? Ha degdegin! U Adeegso Si Aad u Rinjiso ... Mucjiso! Ku Degdeg Si Aad Ugu Sheegto Macaamiishaada!
Bogga ugu weyn / blog / Sidee Loo Sameeyaa Haddii Qubayska Mar Kale La Xayiro? Ha degdegin! U Adeegso Si Aad uqubato… Mucjiso! Ku Degdeg Si Aad Ugu Sheegto Macaamiishaada!
Sidee Loo Sameeyaa Haddii Qubayska Mar Kale La Xayiro? Ha degdegin! U Adeegso Si Aad uqubato… Mucjiso! Ku Degdeg Si Aad Ugu Sheegto Macaamiishaada!
2021 / 01 / 11 Qoondayntablog 1008 0
Iskuulka Ganacsiga Musqusha 2020-11-24
Maydho, waxaan isticmaalnaa maalin kasta. Laakiin miyaad ogaatay in madaxa qubeyska ee loo isticmaalo in muddo ah ay ka buuxaan dhibco miisaanka jaallaha ah? Tani kaliya uma muuqato mid wasakh badan laakiin waxay sidoo kale saameyn ku yeelaneysaa biyaha ka soo baxa qubeyska. Hadday ku tirtirtay maro ama burush, dadaal badan ka dib, miisaanka wali way adag tahay in la nadiifiyo. Waqtigan xaadirka ah, maxaa la sameeyaa? Ha degdegin! Gabadha musqusha ku xigta waxay ku baraysaa habab yar oo fudud ~
Madaxa Maydhashada Wuu Xiran Yahay, Xalka Khiyaamada.
Madaxa qubeyska ayaa xirnaan doona ka dib muddo dheer oo la isticmaalayay. Tani waa wax dabiici ah. Tani macnaheedu maaha in madaxa qubeyska uu jabay, ha walwelin, gabi ahaanba looma baahna in mid cusub la iibsado. Tan badanaa waxaa sabab u ah nuuradda lime oo dhacda ka dib muddo dheer oo dheecaan biyo ah. Kaliya waxaad ubaahantahay inaad kala furfurto madaxa qubeyska si aad u nadiifiso.
1 Waqti dheer oo dheecaan biyo ah ka dib, way adag tahay in walxaha dhalada ah ee ku jira tuubada tubada laga galo ama biyaha tuubada ay ka soo baxaan godka uu ka baxo, waana fududaan doontaa in laga hortago godka laga baxo Ka saar madaxa qubeyska oo si tartiib ah ugu rux tubbada biyaha xagga hoose si aad qashinka ugu daadatid. Ka taxaddar inaad keydiso kaabayaasha marka aad kala furfureyso qarka biiyaha.
2, dooro weel hoos u dhigi kara sanka, ku shub khal khamri ah, nadiifiyaha baaquli musqusha ama nadiifiye limescale gaar ah, aashito daciif ah. Afka geli qeybta dambe ee biyaha si aad u qoyso muddo (1 saac waa ku habboon tahay), isticmaal burush yar oo caday ama burush kale oo nadiif ah si aad u cadayato, ka dibna u dhig biyaha si aad u biyo raaciso.
3, kadib marka biyo raaciyo, ku nadiifi maro gogosha hareeraha godka biyaha iyo dusha miisaanka. La kulan kaydadka "madax adag", ha isticmaalin irbad. Ku xoq cidiyaha ilaa uu ka dhaco, ka dibna ku nadiifi maro.
Hababka Dayactirka Qubayska
1, isticmaalka heerkulka cimilada waa inuusan ka badnaan 70 darajo Celsius. Heerkulka sare iyo iftiinka ultraviolet-ka ayaa si weyn u dardar gelin doona gabowga qubayska, gaabin doona nolosha adeegga qubayska, sidaa darteed rakibidda qubayska sida ugu fog ee ugu macquulsan qolka qubeyska iyo ilaha kale ee kuleylka korantada. Qubeyska laguma rakibi karo baarka qubeyska si toos ah hoosta, masaafaduna waa inay ka badan tahay 60CM.
2, aagga tayada biyaha adag, fadlan iskuday inaad ku isticmaashid qubeyska walxaha caagga ah ama qalab nadiif ah oo toosan. Xitaa haddii daloolka tubbada qubeyska ay ku xiran tahay miisaan, way fududahay in la nadiifiyo. Xusuusnow inaadan xoog ku kala furfurin qubeyska. Sababtoo ah qaabdhismeedka adag ee gudaha qubayska, kala-daadashada aan xirfad-lahayn ee qasabka ah ayaa horseedi doonta qubeyska laguma soo celin karo xaaladdiisii ​​hore.
3, fur oo xiro tubbada qubeyska oo aad hagaajiso habka biyaha qubeyska ha u adkeynin si xoog leh, si tartiib ah u jeedi homeopath. Xitaa qasabad dhaqameedka, sidoo kale uma baahnid inaad kubixiso awood badan. Si gaar ah fiiro gaar ah ha u siin qalabka gacanta, tubada qubayska sida gacan-qabsi lagu taageero ama la isticmaalo.
4, tuubada madaxa birta qubeyska waa in lagu hayaa xaalad fidsan oo dabiici ah, ha ku dhajin qasabada marka aan la isticmaalin. Isla mar ahaantaana, fiiro gaar ah u yeelo isku-xirnaanta tuubbada iyo tuubada ma sameysma dhammaad dhintay, si aan loo jabin ama loo dhaawicin tuubbada.
5, lixdii biloodba mar ama kayar, qubeyska waa lagaa qaadayaa waxaana lagu ridayaa saxan yar. Ku shub oo ku qoy dusha iyo gudaha qubayska khalka cad ee la cuni karo 4-6 saacadood, ka dibna si tartiib ah ugu tirtiro dusha sare ee qolka qubeyska maraqa marada suufka leh. Dib isku xidhka isku xidhka oo biyo mari daqiiqad, sugna khalka iyo miisaanka cad ee ay la soo baxayaan biyaha, si loo baabi'iyo ama loo yareeyo saamaynta miisaanka ee qubeyska, waxayna keeni kartaa xoogaa saameyn ah jeermis dilay.
Tilmaamaha Nadiifinta Qubayska
1, qasabadaha qubeyska darbiga-ku-rakiban guud ahaan waa kuwo caan ah, sidaa darteed ka taxaddar inaadan ku dhicin ama riixin markaad alaabada dhigayso. Ka fogow taabashada siddo iyo walxaha kale ee adag sida ugu macquulsan si looga fogaado dhaawacyada halista ah.
2, farsamada ugu fiican ee nadiifinta ayaa ah in tubada biyaha lagu luqluqo, ka dibna lagu tirtiro maro biyo jilicsan oo ka sameysan dusha birta maro cudbi ah oo jilicsan, maxaa yeelay biyuhu waxay ku sameysmi doonaan cabir dusha sare ee birta marka ay uumi baxaan ka dib. Si tartiib ah u masax, ha u xoqin xoog. Ku qallaji isbuunyo qoyan iyo maqaar jilicsan, waxay ka dhigi karaan dhaldhalaalka tuubada iyo dhalaalka.
3, sida baahida loo qabo shaqo nadiifin badan, waxaa ugu wanaagsan in la isticmaalo nadiifiye galaas dareeraha fudud ah, ama aan aashito lahayn, dareeraha jilicsan ee aan xoqin iyo budada gebi ahaanba la kala diro, xalalka aan khilaafku ka jirin ayaa ka saari kara tuubada wejiga maaskaro adag leh iyo dhisidda. Ha u isticmaalin wax nadiifiyeyaal xoqan, maro ama warqad maro ah, iyo wax kasta oo nadiifiyaal ah oo aysiidh ku jiraan, qashin nadiifiya ama nadiifiyeyaal xunxun. Markii nadiifintu dhammaato, ku nadiifi dhammaan saabuunta biyaha ku nadiifi maro cudbi ah oo jilicsan.
Hore:: Musqulaha Waa La Dayactiri Karaa !!! Musqusha Dadku Way Ogaan Doonaan Next: Naqshadaynta Musqusha Guriga Si Aad U Qurxiso Oo Xaalad Wanaagsan Ku Hayso Qubeyska Maalin Walba
2021 / 05 / 28 543
2021 / 04 / 22 890
2021 / 04 / 22 1048
2021 / 04 / 21 648
2021 / 04 / 12 823